Ukufaneleka waphi emasayizi: US neRussia emashalofini yesimanje
Noma ngezikhathi ebhekene isidingo ukuthenga izicathulo ezintsha noma amabhuzu. Ngenhlanhla, ayinazo inkinga: vele uye kunoma Boutique, izicathulo esitolo, noma nje kwehla emakethe futhi ukhethe izingubo ezintsha ukuze ukunambitheka yakho. Futhi nangu lapho nobunzima uqale.
Izimpahla ezivela emhlabeni wonke futhi anhlobonhlobo Amazing ukuze ingqondo
On emashalofini ungathola izicathulo yesimanje kusukela iJalimane, iChina, i-Italy, i-United States futhi emazweni amaningi ahlukene, futhi - futhi lena ezingemnandi neze - cishe wonke umuntu usayizi zabo isiqu. Yikuphi Yebo, musa uqondane yasekhaya evamile. Russian izicathulo osayizi ngobukhulu omunye "esikhulu". Ngenxa yalokho, lokuphuma hhayi remeasure nedlanzana ezimbalwa zibukeke ongakhetha ezifanele, kuba cishe kungenakwenzeka. Futhi yini okufanele uyenze uma oda emafulethini Vending ballet ngokusebenzisa esitolo online, kanye nokubuya inkonzo izimpahla ke singanikezwanga? Kulokhu, wenza iphutha, ngisho elilodwa ubukhulu - kusho ukulahlekelwa imali nje kuphela kodwa futhi isikhathi kuthatha ukuyithenga kabusha kanye kwezidingo.
Izinkinga ezinkulu zivame ukwenzeka ngesikhathi abathengi Russian ubheke imikhiqizo US. Ngokwesibonelo, usayizi izicathulo zabesifazane, 8.5 futhi 9.5 ungakwazi shí cishe kunoma iyiphi abathengi ukudideka. Phakathi naleso sikhathi, lena kakhulu "ethandwa" izicathulo Russian 38 no-39.
Yini enquma umehluko ngobukhulu?
Ngakho izinto eziyinqaba ngakho isilinganiso osayizi izicathulo? US neRussia, njengamanye amazwe, njalo kwezohwebo kanye, kubonakala, kufanele sibe nesithakazelo yokukala uhlelo olulodwa. Isizathu sokuba lezi umehluko ilula. Ihlala indlela kokubala Usayizi izicathulo futhi amayunithi esetshenziswa emazweni ahlukahlukene. ERussia inombolo yedwa ibalwa amasentimitha, kuyilapho America ngokwesiko asetshenziselwe le nhloso amayintshi (1 intshi - 254 mm). Lesi esinye sezizathu esenza US isicathulo usayizi Russian elihunyushwe kanzima ngakho: imibandela eqondile umphumela cishe ngaso sonke isikhathi ukuthola inombolo wamaqhuzu.
Futhi, kufanele sikhumbule ukuthi eRussia izinombolo isuka inombolo ubuncane nobukhulu, kungekho siphuka, futhi e-United States, kukhona osayizi zezingane, okuyinto kubalwa ngokuhlukile abadala. Ngokwesibonelo, isibalo "1" phezu izicathulo akusho ukuthi izakhamizi phesheya umakhelwane izingane ezincane ugabise ngezinyawo, ofana no-unyawo ingane Russian. Vele Shoes Baby ungaphakathi umnyango ezahlukene Boutique, futhi kukhona uqiniseka ukuthola wokugubha efanayo. Ezindabeni ezinjengokudla isilinganiso osayizi izicathulo, i-United States neRussia cishe wake ukufinyelela esivumelwaneni nezinyunyana, ukuze umehluko wemisindo nemiqondo yamagama anjalo kangcono ukukhumbula ngaphambi uya isifiso sezingubo ezintsha.
Imithetho ekubaleni nenkundla izicathulo
Okwamanje kukhona izinhlelo eziningana kuhlaziywa usayizi izicathulo:
standard International. Ngokusho ke, usayizi unyawo ubude ngamasentimitha, ahanjiswa 5 mm.
Standard European. Liphinde ebalwa amasentimitha, Nokho Phiko 2/3 cm.
IsiZulu ohlelweni imethrikhi. Isebenzisa amayintshi futhi uyakucabangela kuphela ubude insole.
US ejwayelekile. Kanye nesiNgisi, naye ethanda amayintshi. Usayizi ubuncane ingane kuba 3.9 amasentimitha, futhi iyunithi ukubala ezamukelwe ngu "isitebhisi" ukuze 1/3 intshi.
Ngaphezu kwalezi, amazinga ezivamile bungabonakala China yezinombolo, Brazil, France nakwamanye amazwe. Noma kunjalo, ziya ziba mandla ekusebenziseni European noma ngamazwe uhlelo obusiza izicathulo efanelekayo.
Ukufaneleka waphi emasayizi: US neRussia endaweni impucuko ingxabano
Usayizi ubuncane-United States - "0.5" silingana ingane izicathulo ezisanda kuzalwa. Ubude bayo engaphansana nje kwengu-4 amasentimitha; Esikhathini isiko Russian, kuba 10.1 cm, futhi ubizwa ngokuthi "16.5." Isibonelo ukuthi bahumushe ubukhulu izicathulo US isiRashiya, kungabonakala etafuleni elandelayo:
Ubukhulu izicathulo zabesifazane
SM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24,5 25 25,5 26
USA 4 5 5.5 6 7 8 9 9.5 10 11
RU 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37.5 38 38.5
Indlela ukwazi ubukhulu izinyawo zakhe?
Abanye abantu kulula ngekhanda isilinganiso waphi emasayizi. US neRussia, ngenhlanhla, musa ukushintsha amatafula abo imethrikhi njalo ngonyaka. Nokho, iningi ukukhumbula inombolo kwamadijithi (ngisho uma unquma ukukhetha kuphela ubukhulu ububanzi "yabo") is inselele impela. Kukhona isixazululo lapha. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukukhumbula kuphela Russian waphi emasayizi - okuhle, ziseZwini emashalofini zethu kaningi. Noma ukuthwala itafula ephrintiwe futhi ukhulume ngayo phambi fitting. Kodwa konke lokhu - isigamu-izinyathelo. abaqeqeshi US kungenzeka ezifiselekayo kunazo zonke Boutique, futhi etafuleni noma smart phone nge-Internet - ukhohlwe ekhaya. Ngakho-ke, kungcono unomphela ukukhumbula izimiso okufanele kubalwe usayizi izicathulo, futhi uma kunesidingo nje ukubamba engqondweni operation elula zezibalo.
Namathisela umbusi noma imitha umthungi ukuba ayeke futhi ubude bayo, kusukela isithende ukubopha kakhulu kaningi ophumile umunwe. Esikhathini izinhlelo waseBrithani nowaseMelika walabo ngokwesiko lithathwa okusezingeni eliphezulu, kodwa empeleni kungaba phakathi, futhi indandatho umunwe. Akubalulekile ukuxosha "kuyinsakavukela": ukuhamba izicathulo, okuyinto uyazamazama, wena namanje bengayi, ngakho-ke kungcono ukubala Okuyınqo, kunokuba ubukhulu isilinganiso.
Kungcono ukubeka lunyawo lwakho ephepheni bese umaka ukuba azungeze ke. Kulokhu, uma inani ilungelo nomlenze kwesokunxele kwakuhlukile, ukhetha izinga eliphakeme kakhulu. Into engcono kakhulu ongayenza obmerku selishonile ilanga noma ngemva uhamba ibanga elide, ngoba umthwalo kancane imilenze ukuvuvukala ukuthola ezinkulu.
Isibalo kwaphumela kumele zihunyushelwe kuzo zonke inombolo evamile phansi.
Amabhuzu noma izicathulo ngoba umkhiqizi Russian kufanele bahlukanise obuphelele wonyawo lwakhe by 2 nande by 3, bese ufaka ukuze uthole inani uyibona nengxenye: okubizwa ngokuthi "nesabelo obusebenzayo" owawudalwe abakhiqizi nje icala bulging iminwe noma imilenze ezahlukene.
US izimpahla kulula kuqala abale isicathulo yasekhaya: Russia "ngaphambi" IMelika kulokhu ku 22 amaphuzu. Futhi ukuthi uzodinga ongalususa kusukela okuholela usayizi unyawo.
izicathulo Russian Ubude unyawo * 3/2
US izicathulo (Foot obuphelele * 3/2) - 22
Kubalwa usayizi yayo, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi kukhona ipharamitha ezifana "ukugcwala" izicathulo noma umthamo unyawo. Le nombolo ibalwa ifomula kunalokho eyinkimbinkimbi, njengoba umthetho, kuyaqabukela isetshenziselwe izicathulo ezikhululekile. Inkomba ukuphelela, uzodinga uma unquma ukuthenga skates, ski amabhuzu, noma ezinye izicathulo kanzima, okufanele kube ngumuntu okwaziyo Ukuthokomala kokusetshenzisiwe ukuba unyawo. Kulokhu, indlela elula ukusizakala etafuleni njalo.
Ngokuvamile, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ukubala isilinganiso osayizi izicathulo akuyona inkinga. Into esemqoka akukona ukuthi ulahleke, ngibona uphawu ongaziwa phansi, futhi musa ukusheshe ukukala konke.
Kusukela sizogqokani blouses zikakotini?
Izingubo kwabesifazane okhuluphele emkhosini: izitayela engcono
Abesilisa waklebhula jeans ngendlela yesimanje
Swimsuit Thenga Wezingane
Gqoka abakhiqizi Belarusian - izinga okusezingeni eliphezulu, buka amahle
Bodys, iseluleko esisebenzayo okukhetha
Awazi ukuthi yini okumele uyenze on the Internet lapho unesizungu? Funda i-athikili ngalo!
"Oletetrin": lokho kusiza, yokusetshenziswa, Izimo
Pandora - imihlobiso ozinikezele kweqiniso
Kuthiwani uma uma ufaka i-Windows 7 kudinga abashayeli?
Uhlobo yasekuqaleni: umqondo, izinhlobo. Abaculi uhlobo yasekuqaleni. Fire show
Yethula uNyaka Monkey ngezandla zakhe. Hlobo luni izipho ukunikeza e uNyaka Monkey: Amathiphu ngezinkanyezi
Le filimu "The Godfather": izingcaphuno, amazwi catch imishwana